Academic Support Center / Soomaali: Academic Support Center
Ujeeddada Xarunta Waxbarashada la iska Caawiyo ee SPPS - Academic Support Center (ASC) waxay tahay in ardayda dhigato fasallada 6-12 iyo qoyskoodaba si shakhsiyan ah loo arko, lagana taageero dhanka waxbarashada, bulshada iyo shucuurtooda inta ay socoto waxbarashada durugsan. Xarumahan waxay bixinayaan keliya caawin waxbarasho, ee ma ahan fasallo duruus ah oo la dhigayo.
Caawin noocma ah ayaa la helayaa?
Waxyaalaha la iska caawinayo waxaa ka mid ah: akhriska, xisaabta, social studies, sayniska, Ingiriiska/qoraalka, sida loo adeegsado Schoology (Grades 3-12), caawinta tiknoolajiyadda/aaladaha loo adeegsado waxbarashada durugsan (Distance Learning 2.0), iyo caawin ku aaddan la dhaqanka bulshada iyo shucuurta.
Yaa ardayda siinayo caawinta tooska ah?
Waxaa xarumaha ka shaqeyn doono macallin kalkaaliyaal, shaqaale SPPS ugu shaqeeyo si ku meel gaar ah, macallimiin hawl-gab noqday, dad qandaraas lala soo galay, dad ka socdo bulshada, iyo dad mutadawacnimo ku shaqeeyo kuwaasoo dhammaantood horey uga soo shaqeeyay waxbarasho iyo macallinnimo. Waxay waxbarashada ka caawin doonaan ardayda imanayo xarunta ASC.
Ilaa saacado intee le'eg ayay ardaydu joogi karaan xarunta ASC?
Ardaydu waxay heli karaan 3 saacadood oo caawin ah 3 maalin toddobaadkiiba, ugu yaraan 3 toddobaad halkii teeram.
Taariikhda Teeramyada Xarunta ASC:
Teeram 1: Oct. 19 - Nov. 25
Teeram 2: Jan. 19 - TBD
Cunto ma laga bixin doonaa xarunta ASC?
Xafiiska adeegyada nafaqada (Nutrition Services) wuxuu subaxdii iyo galabtiiba dhammaan ardayda siin doonaa cunto fudud oo caafimaadka u fiican.
Gaadiid ardayda qaado ma jiri doonaa?
Gaadiidka cayiman oo ardayda qaado ayaa waxaa qorshaha lagu dari karaa markuu ardaygu isku qorayo barnaamijkan. Xafiiska Meelaynta Ardayda (Student Placement Center (SPC)) waxay qoysaska ka caawin in ardayda la diiwaan-geliyo, gaadiid loo raadsho, barnaamij ASC ahna lagu qoro.
Maadaama ay jiraan baahiyo kale oo dhanka gaadiidka ah (qaasatan barnaamijyada Essential Kids Care, cunto geynta guryaha, iskoollada waxbarashada isku dhafan ka socoto), waxaa suurto gal ah inaan gaadiid mar walba la helin.
Imisa arday ayay qaaddaa xarunta ASC?
We are prepared to welcome 200 students per day at Washington and 100 students per day at the other sites. If there are more requests than can be accommodated, there will be a waiting list and students will be prioritized based on academic needs.
Sidee bay ardaydu isugu qori kartaa caawinta xarunta ASC?
Fadlan wac SPPS Xarunta Meelaynta Ardayda 651-632-3760 si loo xaqiijiyo meeleynta ardayda ee maalmaha, kalfadhi iyo gaadiid haddii loo baahdo.
Qorshe noocma ah ayaa degsan oo ah taxaddar caafimaad iyo mid amni?
Xarumaha ASC waxay raacayaan dhammaan tilmaamayaasha gobolka Minnesota u diyaarshay goobaha iskoollada sida ay doonayso Wasaaradda Caafimaadka Minnesota. Tilmaamayaashan waxaa ka mid ah gafuur-xir laga doonayo dhammaan ardayda iyo shaqaalaha, kala fogaanshaha dadka, iyo gacmaha oo si joogto ah loo dhaqo.
Calaamadaha COVID-19 waxaa ka mid ah: qandho ah 100.4ºF ama wax ka sarreeya, qufac cusub ama sii xummaanayo, neefsashada oo yaraata, dhadhanka ama urinta oo kaa tago, ama ugu yaraan 2 ka mid ah waxan: cune-xanuun, lallabbo, matag, shuban-biyood, qarqaryo, murqa-xanuun, daal badan, madax-xanuun cusub, sanka oo dareera ama cabburma
Ka jawaab afartan su'aalood ee hoose ka hor inta aadan ilmahaaga u dirin iskuulka:
Dhawaan ilma aan dhalay ma laga helay COVID-19?
Ilmahayga ma la nool yahay qof laga baarayo COVID-19 ama lagu arkay calaamadihii COVID-19?
Haddii aad HAA uga jawaabtay mid ka mid ah su'aalaha kor ku qoran:
Ballantaada dib u dhig, oo la xiriir dhakhtarka ilmahaaga.
Wixii xog dheeraad ah, fadlan booqo boggan: Tilmaamaha SPPS COVID-19 ee Ardayga iyo Qoyska.
Haddii aan su'aalo qabo, yaan la xiriiraa?
Maamulaha/Shaqaalaha Iskoolka: John Osorio or Jackie Turner
Qoysaska: Marka hore la xiriir iskoolka ardaygaaga
Isniin ilaa Jimce 8:30 a.m.-3 p.m.*
*Waan xirannahay maalmaha uusan jirin iskoolka
Maalinta Saacadaha Waxbarashada Dheeraadka ah (EDL) / Taageerada Dheeraadka ah ee Ardeyda (ESS)